Oovimba be-COVID-19-Funda ukuRhweba
I-S & P 500 yeenzuzo eziMdaka zihlala zingahambelani namaNqanaba angama-3800 ngokulandela ingxwabangxwaba yezopolitiko yase-US, i-COVID-19
Ukuhlaziywa: 12 January 2021
Uhlalutyo lwexabiso le-S & P 500-Januwari 12
I-S & P 500 iyatshintsha ngokujikeleza amanqanaba e-3801-3816, inyuke nge-0.19% yangaphakathi nge-Lwesibini, kwaye isilele ukwandisa ukubuyela umva komhla wokuqala kwinqanaba eliphezulu le-3831.4. Ukungaqiniseki kulawulo luka-Mongameli wase-US uDonald Trump ujoyina i-coronavirus (i-COVID-19) yeha yokulinganisa umngcipheko.
Amanqanaba okumelana: 4000, 3900, 3840
Amanqanaba enkxaso: 3735, 3691, 3546
I-S & P 500 yexesha elide iTrend: Bullish
Kwiitshathi zemihla ngemihla, i-S & P 500 iqhubekile ihamba kakuhle kurhwebo olusecaleni kwaye isalathiso sinokuzama inqanaba elilandelayo lokuchasana ngo-3840. Inkxaso elandelayo kumanqanaba angama-3735.
Ukunyanzelwa kwexesha elide kuhlala kulumke kakhulu ngokuxhathisa okubonwe kuma-3900 ekuqaleni, ngaphezulu okufunekayo ukucoca indlela yokuqhubela phambili ukuya kumanqanaba angama-4000. Ngexesha elifanelekileyo nangona sinokubona uvavanyo olunzima lweqela lamanqanaba okuqikelela kwi-3850/85 band.
I-S & P 500 yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Bullish
Isalathiso se-S & P 500 sikumjikelo ojikelezayo wexesha lexesha leyure ezi-4 kwaye oku kuthetha ukuba intengiselwano yosuku lwangaphakathi inokufumaneka ngokuhambelana nomda wexesha elikhulu. Ukujonga isakhelo sexesha leyure ezi-4, ixabiso lenze ipateni eyahlukeneyo kwaye bahlala bephula kwicala lendlela yangoku.
Ngokubhekisele kwi-RSI, ithengisa ngaphaya kwemida yayo, nangona kunjalo, ukuxhathisa okuthe tyaba kwi-3840 kunokubonelela ngokuchasene nesalathiso semali ngaphakathi kwale seshoni nakwilandelayo. Kwelinye icala, ukuba i-S & P 500 ibuyela ezantsi, ixhaswa kwiidiphu ngumgca wenkxaso othe tyaba kumanqanaba angama-3735 apho abathengi banokuphinda bavele khona.
tags Covid-19, I-S & P 500
I-Dola kunye ne-Euro Hlala Unobunono Njengokuqhubeka kwePullback yeGolide
Kwakukho uluvo oluxubekileyo kubungozi be-coronavirus, njengoko iimarike zibukele ubhubhane kunye nentengiso yesitokhwe ngokungathi lilizwe lasemva komhlathana.
Ngokuphathelele i-euro, uninzi lwentengiso lwenzeka ngedola, kodwa umgaqo-nkqubo waseYurophu unokuphinda ubonakalise ukuba yingxaki kwimali enye.
Ngelixa idola yaseMelika ishenxisiwe ukusuka kumanqanaba ayo angaphambili alandela idatha yezindlu, idola yayisekuwo isihlanu ukwehla ngokuthe ngqo njengoko iindaba zePfizer zinika abatyali mali ukulungela ukuthatha umngcipheko. Isalathiso sedola ye-DXY yehla yaya kwi-92.21 kodwa emva koko yafumana kwakhona ukuya kwi-92.37.
Iimali zezinto zorhwebo zithambile, kunye nedola.
Ngokobuchwephesha, nangona kunjalo, ukubuyela kweGolide kunokuba ngumqondiso wokubuya kwiDola. Kwelinye icala, i-franc yaseSwitzerland kunye ne-yen zizinzile ngakumbi kunye ne-sterling. Phakathi evekini, idola yeyona ibuthathaka ngalo mzuzu, ilandelwa yiFranc yaseSwitzerland. Idola yaseNew Zealand yeyona inamandla, ilandelwa yi-yen. Kodwa ngokubanzi, izibini eziphambili kunye neminqamlezo ubukhulu becala zithintelwe kuluhlu lweveki ephelileyo.
Idola kunye ne-euro zithengisa kancinci namhlanje kwiimarike zokudibanisa ezibuthathaka. UYen noKiwi, kwelinye icala, banamandla ngakumbi. Akukho mqondiso ucacileyo woluhlu oluphumayo okwangoku.
I-COVID-19 kunye neempembelelo zeNtsholongwane yeeNtsholongwane eFayo
Okwangoku, iimarike zezemali xa zizonke ziye zajika zadityaniswa njengoko iindaba zokugonya ziqhubeka nokuphela. I-Pfizer ibonelele ngeendaba ezilungileyo kwizitofu zokugonya ze-coronavirus. Iziphumo zokugqibela zenqanaba lokugqibela lesifundo zibonise ukusebenza kwe-95%. Inkampani ikulungele ukufaka isicelo semvume engxamisekileyo eMelika kwiintsuku nje ezimbalwa. Nangona kunjalo, abatyali mali babonisa intloko epholileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ngokwedatha equlunqwe yiYunivesithi yaseJohns Hopkins, inani lababhubhileyo e-coronavirus yase-US kungoku li-250,029, nelona nani liphezulu lokufa kunalo naliphi na elinye ilizwe emhlabeni, kwaye iimarike zikuthathele ingqalelo oku.
Kumhlaba jikelele, bangaphezulu kwezigidi ezingama-56 abantu abosulelekileyo kwaye ngaphezulu kwe-1.3 yezigidi sele beswelekile, ngokukaJohns Hopkins.
tags Covid-19, Euro, igolide, KwiDola yaseMelika, yen
Ukungaqiniseki konyulo lwase-US kunegalelo kwimeko yezoqoqosho
Ukuhlaziywa: 9 Novemba 2020
Iveki ezolileyo ezayo yokukhutshwa kwedatha, eya kuthi ibe nexesha lokucinga ngeziphumo zonyulo lukaMongameli wase-US- kunye nokuba yintoni ekunokwenzeka ukuba ibe ngumongameli weBiden. Iziphumo zokuvota e-US eCanada, njengoloyiso luka-Biden, kusenokwenzeka ukuba luthetha ukungaqiniseki okuncinci kurhwebo lwamanye amazwe, kodwa umngcipheko onokubakho ekugqityweni kombhobho we-Keystone XL.
Inkxalabo enkulu yokujonga imeko yezoqoqosho e-United States naseCanada kungekudala ingumngcipheko womjikelo omtsha wokuthintela intsholongwane. Inani lamatyala e-United States lifikelele kwiirekhodi ezintsha. Iimarike zabasebenzi ziqhubekile nokuphucuka nanjengoko oorhulumente besathandabuza ukubeka imiqobo kwakhona, kodwa amabango entswela-ngqesho aphezulu kakhulu.
Iimarike zomsebenzi ziyaqhubeka nokuphucula ngaphandle kwala macandelo - kwaye idatha yokuqala evela kuPhando lwezeMveliso zaseCanada (ngo-Okthobha PMI kwi-55.5) yahlala izinzile. Iiyure ezipheleleyo ezisetyenzisiweyo zonyuse enye i-0.8% ngo-Okthobha, ebonisa enye inyuka kwi-GDP. Kodwa umngcipheko uhlala wokuba amanyathelo angqongqo okuqulatha aya kubeka uxinzelelo kuqoqosho kwiinyanga zokugqibela ze-2020.
IVeki yezoQoqosho engaphambili
I-EUR / USD. Njengoko besilindele kwingqikelelo yangaphambili, ngenxa yoloyiso lukaJoe Biden kunyulo lukaMongameli wase-US, ukunyuka kwezitokhwe zase-US, kunye nemiyalezo ekhuthazayo evela ngaphambili malunga ne-COVID-19, i-euro kunye nezinye izimbangi zedola zinokuphinda zibuye ngokukhawuleza izikhundla zabo zangaphambili zalahleka.
I-GBP / i-USD. Imali yase-Bhritane inyuke kungekuphela ngenxa yokuwa kwedola, kodwa ngenxa yesigqibo seBhanki yaseNgilane, ethe ngoLwesine, nge-5 kaNovemba, yathatha isigqibo sokubonelela ngenkxaso eyongezelelweyo kuqoqosho lwelizwe, yonyusa inkqubo yokuthenga iibhondi ngo-150 iibhiliyoni zeepawundi kwaye uzizise kuma-895 ezigidi zeepawundi.
Ngokubhekisele kwi-coronavirus, azikho iindaba ezilungileyo ezivela kule ngaphambili esele zixeliwe. Ngapha koko, ukuvota kunyulo kukhokelele kwirekhodi elitsha e-United States: i-100,000 yosulelo olutsha ngosuku nje olunye.
tags Covid-19, Unyulo lukaMongameli wase-US
Iingxoxo zeBrexit zokuqhubela phambili njengeSterling Range-Bound emva kokungaqiniseki
Ukuhlaziywa: 16 October 2020
I-Sterling isendaweni ebonakalayo namhlanje kwiimarike ezizolileyo. Uchulumanco ngeBrexit lubangele ukungazinzi okuqinileyo kwiponti. Kodwa ihlala ngaphakathi kwemida eyamkelekileyo, emva kwayo yonke loo nto, uthethathethwano phakathi kwe-UK kunye ne-EU ziya kuqhubeka kule veki izayo, mhlawumbi ngokuqina okuthile.
Ngokumalunga neveki, idola yase-Australia ihlala ibuthathaka, ilandelwe yeyona ibalaseleyo, eyona inamandla- iyen, ilandelwe yidola. Ixesha elizayo lesitokhwe sase-US libonisa ukuvuleka okuphezulu kancinci. Kodwa intengiso ehlaziyiweyo kwizabelo inokutyhala idola kunye ne-yen ukuya ekuvaleni okunamandla kweveki.
Ngokobuchwephesha, ukungazinzi, ekugqibeleni, i-GBP / USD ibambe ngaphezulu kwenkxaso encinci kwi-1.2845. I-EUR / GBP ibambe uxhathiso olungezantsi kwi-0.9162. I-GBP / JPY ibuyise umva ngaphezulu kwe-135.66 yenkxaso encinci emva kwekhefu elifutshane. I-GBP / CHF ikwaphethe kakuhle ngaphezulu kwe-1.1723 yenkxaso encinci emva kokuntywila okufutshane. Imbonakalo yesikiti ayibi kangako, nangona isengozini.
Izitayile zokubuyisa zase-United Kingdom ngenxa ye-COVID-19 kunye ne-No-Deal Brexit
Ukubakho kokunyanzelwa kwezithintelo ezingqongqo ze-COVID-19 kunye nokushiya i-EU ngaphandle kwesivumelwano ekupheleni konyaka kuthetha ukuba kukho umngcipheko wokubuyela kwimeko yesiqhelo. Ngapha koko, njengoko amanye amanyathelo enkxaso karhulumente ephela, isigaba esilandelayo sokuchacha siyakuba buhlungu kakhulu kumakhaya nakumashishini.
Yiyo loo nto abacwangcisi be-Capital Economics bekholelwa ukuba iBhanki yaseNgilani iyakwandisa ukwanda ngamanani ngamanye ama- $ 250bn ekupheleni kuka-2021 kwaye inganyusi amaqondo enzala ngaphezulu kwe-0.10% kude kube ngu-2025.
“Njengokuba kufikelelwe kwizivumelwano ezininzi, umsantsa ophakathi kwesivumelwano seBrexit kunye nokushiyeka kwesivumelwano kunciphile. Siqikelela ukuba a "Ubambiswano" Ukungasebenzi, apho i-UK kunye ne-EU zisebenza kunye ukunciphisa ukuphazamiseka, kuya kuthetha ukuba i-GDP kwi-2021 iya kuba malunga ne-1.0% isezantsi kunokuba ibinokwenzeka ngenye indlela. Kwimeko yokungabikho kwentsebenziswano, xa kungekho ntsebenziswano, i-GDP inokuba malunga ne-2.5% isezantsi. Nokuba loluphi ukhetho luyakucothisa ukubuya kwe-UK kwiingxaki ze-COVID-19 xa kuthelekiswa nolunye uqoqosho. "
tags Brexit, Covid-19, EU, Pound Sterling, UK
Ukunyuka kweedola njengoKuphinda ubekho kumngcipheko weBolsters Coronavirus Resurgence
Ukuhlaziywa: 24 Septemba 2020
Idola igcine umfutho oqinisekileyo kwisiqingatha sokuqala sosuku, iqhubeka nokunyuka iye phezulu ngeveki ngokuchasene uninzi loontanga bayo abaphambili, nangona imfuno yedola inciphile ngexesha lokuthengisa laseMelika. Amabango aphezulu ahlala engenamsebenzi e-US abeka uxinzelelo kwidola. Intshukumo yayinomda phakathi kwekhalenda ye-macroeconomic ebuthathaka.
Ukuthintela umngcipheko kuqhubeka nokulawula iimarike phakathi koloyiko lomtshangatshangiso omtsha wosulelo lwe-coronavirus njengoko i-hemisphere esemantla iqala ukusebenza ekwindla nasebusika. Izabelo ze-US zivaliwe ngokuphawulekayo emva kokuhlawulwa kokuqala okufutshane.
Ngosuku lokugqibela lokuthetha, intloko ye-US Federal Reserve System uPowell wathi "kukho umngcipheko wokuba imeko yezoqoqosho ibe mandundu ukuba inkxaso yamakhaya ngandlel 'ithile ayiqhubekeki," ephinda ebiza abenzi bomthetho. ukubonelela ngenkxaso yemali.
Iimarike zaseAsia zithengisa kakhulu, kunye nee-indices eziphambili kubomvu obomvu. Kwiimarike zotshintshiselwano lwangaphandle, iimali zorhwebo ziyaqhubeka ukwehla njengezona zibuthathaka. Idola kunye ne-yen zezona zinamandla, kodwa ngoku, idola inenzuzo.
Imizuzu ye-BoJ iphakamisa ukuXhalaba malunga nokuPhinda kwakhona kweCoronavirus
Imizuzu yentlanganiso yeBhanki yaseJapan ngoJulayi 14/15 ibonise ukuba abezopolitiko bakhathazekile ngokuvela kwakhona kwe-coronavirus eJapan. Amalungu ebhodi aliqela athi "inani labantu abasulelayo kwihlabathi liphela liyakhula ngesantya esiphezulu, ngenxa yoko kufuneka sikhangele ukuba kungakho olunye uvukelo, kubandakanya neJapan." Elinye ilungu lalumkisa ngelithi: “Ukuba inani labantu abasulelayo liyenyuka kwakhona, ixesha lokuphinda libuyele kwezoqoqosho liza kulibaziseka.”
Ngokubanzi, amalungu avumile ukuba “uqoqosho, ngokuqala kwakhona kwemisebenzi yezoqoqosho, kungenzeka ukuba luphuhle kancinci kancinci ukusukela kwisiqingatha sesibini salo nyaka; Nangona kunjalo, isantya sokuphucuka kulindeleke ukuba simodareyithe, ngelixa ifuthe le-COVID-19 liyakuhlala jikelele.
tags IBhanki yaseJapan, Covid-19, Idola yaseMelika